Izici, imvelaphi nokubaluleka kwensimu kazibuthe Yomhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umhlaba une- Amandla kazibuthe omhlaba sibonga ukuthi sisaphila. Le nsimu kazibuthe isuka ngaphakathi kweplanethi iye ngaphandle iye esikhaleni lapho ihlangana khona nomoya welanga. Kuyaziwa nangegama lenkambu ye-geomagnetic futhi kunikezwa ngenani lezinsimbi ezitholakala ku-nucleus, eyokugcina izingqimba zomhlaba.
Kulesi sihloko sizobona ukubaluleka kwamandla kazibuthe womhlaba, umsuka wawo, ukusebenza kwawo nokuthi kwenzekani ngawo njengamanje.
3 Izici zensimu kazibuthe Yomhlaba
4 Ukubaluleka kwamandla kazibuthe
Kunjengokungathi luhlobo lukazibuthe esinalo ngaphakathi kweplanethi yethu. Amandla kazibuthe akhiqizwa uhlobo lwemisinga kagesi edalwa yilokho okubizwa ngokuthi yi-convection currents ekhona engxenyeni yoMhlaba. Le misinga kagesi yenzeka ngoba kuyi-nucleus kunenani elikhulu lezinsimbi ezifana ne-iron ne-nickel. Inqubo okwenzeka ngayo imisinga ye-convection ibizwa ngokuthi yi-geodynamic.
Isayensi kade yafunda lo mandla kazibuthe womhlaba. Ingqikithi yoMhlaba icishe ibe yizingxenye ezimbili kwezintathu ubukhulu benyanga. Cishe ingu-5.700 degrees Celsius, ngakho-ke insimbi icishe ishise njengobuso beLanga uqobo Njengoba kunengcindezi etholwa ezinye izingqimba zomhlaba, siyabona ukuthi insimbi ayilona uketshezi. Ingqimba engaphandle enye ingqimba ewugqinsi lwamakhilomitha angama-2.000 XNUMX eyakhiwe nge-iron, i-nickel nezinye izinsimbi ezisesimweni soketshezi. Lokhu kungenxa yokuthi ingcindezi engxenyeni engaphandle iphansi, ukuze amazinga okushisa aphezulu abangele ukuthi izinsimbi zincibilike.
Umehluko ekushiseni, ingcindezi kanye nokwakheka ngaphakathi kwengqikithi engaphandle yikho okubangela lokho okubizwa ngokuthi yimibuthano yokudlulisa yensimbi encibilikisiwe. Lapho kubanda, okujiyile kuyacwila, okufudumalayo, into eminyene iqala ukukhuphuka. Kuyafana nalokho okwenzeka ngezixuku zomoya emkhathini. Kufanele futhi sikubale lokho, umphumela we-coriolis ngenxa yokuhamba komhlaba ojikelezayo nawo usebenza. Ngenxa yalokho, Ama-eddy ayenziwa ahlanganisa izinsimbi ezincibilikisiwe.
Ukuhamba okuqhubekayo koketshezi okwenziwe ngensimbi ngobuningi babo yikhona okwenza imisinga kagesi, yona ekhiqiza amandla kazibuthe. Izinsimbi ezisebenza ngogesi zidlula kulezi zinkambu zikagesi futhi ziyaqhubeka nokwakha imisinga yazo kagesi. Ngale ndlela, umjikelezo uqhubeka. Umjikelezo ophelele nowenele ubizwa nge-geodynamic.
Amandla weCoriolis abangela ukuvunguza okubangela ukuthi amasimu amaningi kazibuthe agudle ohlangothini olufanayo. Umphumela ohlangene wayo yonke le migqa yamandla kazibuthe wenza amandla kazibuthe amboze uMhlaba.
Uma sikhuluma ngongqimba loMhlaba noma umkhathi ohlobene namandla kazibuthe woMhlaba, sikhuluma ngemagnetosphere. Yindawo yomkhathi engaphandle, ezungeze iplanethi, futhi elawulwa ngokuphelele yilo kazibuthe womhlaba. Isimo se-magnetosphere sinikezwa umoya welanga oshaya ngaphezulu. Lo moya welanga ucindezela ingxenye ethile kazibuthe ngakho-ke, unweba uhlangothi olungaphesheya. Lokhu kunwetshwa okukhulu kwaziwa ngokuthi "umsila kazibuthe."
Umoya welanga ngumsebenzi wenkanyezi yethu enkulu, iLanga. Lo moya welanga ulayishwe ngemisebe okuthi, uma ingena emkhathini wethu, kungadala umonakalo omkhulu ezinhlelweni zokuxhumana ngocingo emhlabeni jikelele. Kungaba yinhlekelele enkathini yezobuchwepheshe esiphila kuyo. I-GPS ibizohluleka, bekungekho ukutholakala ngocingo, amaza omsakazo noma ithelevishini, njll. Ngakho-ke, ngenxa yobukhona bemagnetosphere sivikelwe.
Izici zensimu kazibuthe Yomhlaba
Sizohlaziya izici zale nsimu kazibuthe etholwe yisayensi eminyakeni edlule kanye nezinkulungwane zezifundo ngayo.
Amandla ensimu kazibuthe aphansi kakhulu eduze nenkabazwe futhi aphakeme kakhulu ezigxotsheni.
Umkhawulo wangaphandle yi-magnetopause.
I-magnetosphere isebenza ngendlela eguquguqukayo ngaphansi kokwenza komoya welanga. Ngokuya ngomsebenzi wayo, ingacindezelwa kolunye uhlangothi ngaphezulu futhi inwetshwe kolunye, olubizwa ngokuthi umsila kazibuthe.
Izigxobo ezisenyakatho naseningizimu kazibuthe azifani nezigxobo zezwe. Isibonelo, phakathi kwezigxobo ezisenyakatho zikazibuthe nezokuma komhlaba cishe kuneziqu eziyi-11 zokuchezuka.
Ukuqondiswa kwensimu kuyashintsha kancane futhi ososayensi bebelokhu betadisha ushintsho lwayo. Ukunyakaza kuye kwashesha ngamamayela angama-40 ngonyaka.
Kunemibhalo ehlukahlukene yokwakheka komhlaba eye yafundwa ngenxa yamaminerali athile avela olwandle, athi lokho amandla kazibuthe aguqulwe ngokuphelele izikhathi ezingamakhulu kule minyaka eyizigidi ezingama-500 edlule. Kulokhu kuguqulwa, izingongolo zaziba semikhawulweni ebhekene nokuthi uma besisebenzisa ikhampasi ejwayelekile, ibingakhombe enyakatho, kepha ibizokhomba eningizimu.
Ukubaluleka kwamandla kazibuthe
Ukuze ubone ukubaluleka kwamandla kazibuthe, sizochaza ukuthi isebenza kanjani nokuthi iyini ukuba nayo emhlabeni wethu. Yikho okusivikelayo kumonakalo ongadalwa wumoya welanga, njengoba sishilo ngaphambili. Ngenxa yalesi magnetosphere, sikwazi ukubona umoya welanga ngokusebenzisa ezinye zezinto ezikhangayo njenge I-Aurora borealis.
Le nsimu kazibuthe nayo ibhekele ukuba kwethu nomoya. Umkhathi yilowo osivikelayo emisebeni yelanga yeLanga nakuleyo egcina izinga lokushisa okuhlala kulo. Uma kungenjalo, amazinga okushisa abe phakathi kwamadigri ayi-123 kanye no -153. Kumele futhi kuthiwe izinkulungwane zezilwane, kufaka phakathi izinhlobo ezinjengezinyoni nezimfudu, zisebenzisa amandla kazibuthe ukuzulazula nokuziqondisa ngesikhathi sokufuduka kwazo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana namandla kazibuthe woMhlaba nokubaluleka kwawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Amandla kazibuthe omhlaba